Nakidzwa neApple Watch yako nepfungwa yeNike + tambo | Ndinobva mac
Nakidzwa neApple Watch yako nepfungwa yeNike + tambo
Chimwe chezvinhu zvakatisiya takatyamadzwa apo Apple yakaunza iyo Apple Watch Nike + yaive pfungwa yeiyo fluoroeslastomer tambo iyo Apple pamwe naNike vakatipa isu chete kune iyo Apple Watch modhi.
Kana isu tichiti ivo vaive vega, isu tinoreva kuti iwe unogona kungova neyakadai tambo kana iwe ukatenga iyo Apple Watch Nike + modhi. Zvisinei, nguva pfupi gare gare, makopi akawanda kana zvishoma padyo nepfungwa iyi akatanga kutenderera pamambure Nhasi tinopa modhi yakatengwa kwazvo uye kupera kwayo kwakanyanya, kwakafanana.
Kana paine chinhu chimwe chandinoda nezveApple Watch, iko mukana wekugona kushandura mabhanhire ayo kuitira kuti panguva dzese dzese iwe ugone kurinda pazviitiko zvese. Nhasi ndinoda kugovana newe chiziviso kubva kune anonyatso kuzivikanwa AliExpress matinogona kutenga mabhande anonyatso kufanana nepfungwa yeNike +, kuve nekukwanisa kupa yako Apple Watch chimiro chitsva chegore rinotevera.
Sezvauri kuona mumifananidzo yatinobatanidza, chimiro chavo chakafanana ne fluoroelastomer asi nepfungwa yeNike +. Iwe unazvo zviripo mumarudzi gumi akasiyana pamutengo we6,22 euros pachikamu. Iwo zvakare anowanikwa mune mana saizi, maviri eiyo 38mm saizi uye mamwe maviri eiyo 42mm saizi.
Usazeze uye odha imwe yeaya tambo. Ndatenga matatu mavara uye sezvo ndinawo neni handina kurega kuashandisa. Ini ndapa bhurasho idzva rerudzi kune yangu Apple Watch pamusoro pekuratidza idzva tambo tambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nakidzwa neApple Watch yako nepfungwa yeNike + tambo
Mactracker, zvakare inogamuchira iyo yekuvandudza nhasi ichiwedzera iyo AirPods pakati pezvimwe zvitsva
Remote Desktop Mutengi inogadziridza yave kuwanikwa